देशलाई अफगानस्तान बन्नबाट बचाउन संघीयता खारेज गर्दै धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह आवश्यक छ
आगामी २५–३० वर्षपछि नेपालको अवस्था पनि अफगानस्ताको जस्तै नहोस् भन्नका लागि पनि धर्म निरपेक्षताको सवालमा जनमत संग्रह गर्न आवश्यक रहेको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बताएका छन ।
मिश्रले आफूले ल्याएको अवधारणमा धर्मनिरपेक्षता बारे उठान गर्नुको मुख्य कारण नै यही भएको दाबि गरेका छन ।
मिश्रले योहो टेलिजिभनको बुधबार राति प्रशारण भएको विषेश कार्यक्रम सत्य संवाद कार्यक्रममा कुरा गर्दै संघीयता खारेजी गर्नु पर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन ।
संघीयताले नेपालमा झन् आर्थिक संकट निम्याउन सक्ने भन्दै यो नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेजी बारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने विषय उठान गरेपछि मिश्रको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
पृथ्वी नारायण शाहले बल र हिंसा प्रयोग गरेका थिए भनेर उनले निर्माण गरिदिएको नेपालमा बसेर के म नेपाली भनेर गर्व नगरौँ ? आजभन्दा २५० वर्ष अघि राष्ट्रहरू निर्माण हुँदा सन्सारमा कहाँ चाहिँ बल/हिंसा प्रयोग भएन? अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रतिप्रश्न उठाएका छन ।
मिश्र थप छन – फर्केर हेर्दा, कुनै पनि पार्टी र शिर्ष नेताका लागि ‘राष्ट्रियहित (national interest)’ प्रधान प्राथमिकता नै बनेको रहेनछ। सबैका लागि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ सदा प्रधान बनेछ। देशलाई शीरमा नराखी देश कसरी बनाउने?
राष्ट्रियहितलाई एक नम्बरको प्राथमिकता नबनाएसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन, वैदेशिक हष्तक्षेप, स्वार्थपुर्तिका लागि जातीय/क्षेत्रीय भावनालाई उद्वेलित बनाउने दुर्नियत, धर्म/संस्कृति/स्वाधिनता/स्वाभिमानमाथिको आघात, कुनै पनि कुरामा कमी आउँदैन।
हेर्नुहोस ”देश “राजनीतिक मार्ग परिवर्तन“ को एजेन्डामा उन्मुख भईसक्यो”